PH : 09… Continue
Added by manawphyulay on October 29, 2009 at 11:28am —
No Comments MyanmarING Second Camp
2008 December 21 တွင်ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ အလံပြဘုရားလမ်းပေါ်တွင်ရှိသော သမ္မတဟိုတယ်တွင် MyanmarING 1st Camp ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ စာတမ်းတင်သွင်းသူ (၁၁)ဦးရှိခဲ့ပြီး၊ ဖိတ်ကြားထားသူများအပါအ၀င် စိတ်ပါဝင်စားသူများ တစ်ရာခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။ 1st Camp ကဲ့သို့အလားတူ 2nd Camp ကို 2009 December လလယ် 19 နှင့် 20 (Sat & Sun) နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅း၃၀ အထိကျင်းပရန်လျာထားသည်။ 1st Camp တွင် တစ်ရက်တည်းသာကျင်းပခဲ့သော်လည်း 2nd Camp တွင် နှစ်ရက်ကျင်းပရန်လျာထားသည်။… Continue
Added by sayargyi on October 29, 2009 at 10:31am —
No Comments G-Talkသူခိုးဖမ်းနည်း
Added by N@uGhtY G!rL on October 25, 2009 at 2:14pm —
SQL Injection Attacks(1)
“SQL Injection” ဆိုတာကတော့ ပုံမှန် user input တွေနေရာမှာ attacker ဟာသူ့ရဲ့ attack SQL code တွေကို အစားထိုးတည့်ပြီး database ဆီကို ပို့လွှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ code တွေကို SQL database မှာ အလုပ်လုပ်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ tutorial လေးကတော့ အကောင်းဆုံးမဟုတ်တောင် သဘောတရားအနည်းငယ်ကိုတော့ သိစေမှာပါ။ ဒါကိုသိဖို့ SQL server request code အနည်းငယ်ကို အကျွမ်းတ၀င် ရှိဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။
အခု website တစ်ခုကို ဘာမှ မသိဘဲ hack ကြည့်ပါမယ်။ ဒါကို blind… Continue
Added by smart1500 on October 25, 2009 at 5:00am —
problems of getting paid online
I am from Myanmar.I am trying to work online and I've found some jobs suited to my qualifications.Especially I am more interested in writing than IT business.As far as I know,there isabig barrier for me to get paid because we are not allowed to open an account in Paypal or Alertpay or something like that.When I got inside here,I was really impressed by Ko Chit's idea of ekyat.For example,in China there is no eyun.Have you heard about that?Evenagiant country just like China cannot made such… Continue
Added by thin set on October 22, 2009 at 9:17pm —
A not so famous web-hosting I'm using
ကျွန်တော်အခုသုံးနေတဲ့ hosting ပါ...
တစ်လမှ 1$ ပဲပေးရတယ်... linux server ပါပဲ...
Web space 40GB ရတယ်...
Monthly Bandwidth က 100 GB ရတယ်...
subdomain အခု ၂၀.. mysql database ၂ ခုနဲ့ email အခု ၅၀ ရတယ်...
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်ကလင့်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်...
လုပ်ငန်းကြီးမဟုတ်ပဲ.. small biz, personal တွေအတွက်တော့ တော်တော်လုံလောက်တယ်ထင်ပါတယ်..
ဒီထက်ကောင်းပြီးပိုအဆင်ပြေတဲ့ hosting… Continue
Added by Aung Sithu on October 22, 2009 at 1:00pm —
Programmer vs. Computer Scientist
Joel Spolsky ရဲ့ The Duct Tape Programmer ဆိုတဲ့ Article က အများကို အတော်လေး လှုပ်ခတ် သွားစေပါတယ်...
Joel ကို ထောက်ခံတဲ့သူတွေ ရှိသလို ဆန့်ကျင်တဲ့သူတွေလဲ တစ်ပုံကြီးပါပဲ... Duct Tape Programmer ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးကိုခေါ်တာလဲ ရှင်းပြချင်ပါတယ်...
Software Project… Continue
Added by Ei Maung on October 22, 2009 at 1:00pm —
A complete Hacking Guide
ကျွန်တော်တို့ Website တွေ Forum တွေမှာ တွေ့နေရတာ လူတွေ မေးနေကြတာတွေထဲက အများစုကတော့ အီးမေးလ်တစ်ခုကို ဘယ်လို HACK မလဲ ၊ သူ့ password ကို ဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲ ၊website တစ်ခုကို ဘယ်လို attack လုပ်မလဲ ဆိုတာတွေပါ ၊ ဒီ tutorial လေးကတော့ သင့်ကို HACK တစ်ခုရဲ့ အခြေခံသဘောတရားကို နားလည်အောင် အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ် ၊နောက်ပြီး အဲလို attacker တွေရဲ့ ရန်ကနေ ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ ဆိုတာတွေကို ရှင်းပြသွားပါမယ် ။
Hacking ဆိုတာကတော့ ဟိုး Window 98 စကတည်း က… Continue
Added by smart1500 on October 17, 2009 at 11:39am —
Norton Software for Windows XP
If some one wanna to use Norton Anti-Virus Software for Windows XP, can use it. Duration time is3Months.
Norton.exe Added by mrthant on October 15, 2009 at 1:00pm —
အိုင်တီ ညီအကို မောင်နှမအချင်းချင်း အိုင်တီပညာများ လေ့လာဖို့၊ သိတာလေးများ ရှိရင် ရှယ်ယာဖို့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဒီမြန်မာအိုင်တီ အဖွဲ့ကို လာခဲ့တာပါ။ အိုင်တီအကြောင်းတော့ လေ့လာဆဲပါဗျာ။
အားလုံးသော ချစ်သော မြန်မာအိုင်တီ ညီအကို မောင်နှမများ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေဗျာ...
မောင်သန့် Added by mrthant on October 15, 2009 at 12:02pm —
ပိုက်ဆံတစ်ပြားမှ မကုန်ဘဲ ဒေါ်လာ ၆၅၀ တန် လက်ပ်တော့ကွန်ပျူတာရမယ်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲမှု အခြေအနေ၊ အင်တာနက် သုံးစွဲမှုအခြေအနေများကို လေ့လာရန်နှင့် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အိုင်စီတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို သုံးသပ်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ကြာသပတေးနေ့)မှ စတင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ တပ်မတော်ခန်းမ၌ ကျင်းပမည့် မြန်မာအိုင်စီတီပြပွဲ ၂၀၀၉ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်အသင်းနှင့် Novel Light Media တို့ ပူးပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူများထံမှ အိုင်တီအခြေအနေ… Continue
Added by manawphyulay on October 15, 2009 at 10:14am —
Myanmar Ubuntu Users Group
ကျနော်တို့ရဲ့ Myanmar Ubuntu Users Group မှ Ubuntu Users များ အဆင်ပြေစေရန် ရန်ကုန်မှာ စင်တာနှစ်ခုဖွင့်ထားပီး စီဒီများ ဖြန့်ဝေပေးနေပါသည်။ အခြားနယ်များတွင်လည်း နယ်က စိတ်ဝင်စားသူအချို့နှင့် ပူးပေါင်းပီး စင်တာအဖြစ် ဖွင့်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။
http://www.ubuntu-myanmar.org Added by Tun Tun Aung on October 10, 2009 at 11:00pm —
Use MVC Pattern Right Now
[ ဒီ Post မှာ Software Development လို့ပြောရင် Desktop Application Development နဲ့ Web Application Development နှစ်မျိုးစလုံးကို ဆိုလိုပါတယ် ]
Software Development မှာ Maintenance ရဲ့ အရေးပါမှုကို အားလုံးပဲ သိထားကြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်... ဒါပေမယ့် အများစု နားလည်ထားတာက Software Development ပြီးလို့ Shipping လုပ်ပြီးပြီ ဆိုတော့မှ Maintenance စတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်... အဲ့ဒါမှားပါတယ်...
Added by Ei Maung on October 8, 2009 at 8:30pm —
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကတော့ တစ်ပတ်လုံး စနေကော တနင်္ဂနွေပါ ရုံးမှာ Games Convention Asia (GCA) 2009 အတွက် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်... ကျွန်တော့်ကုမ္ပဏီက commercial ဂိမ်းရယ်လို့ မယ်မယ်ရရသိပ်မရှိပေမယ့် သွားမယ်ဆိုတော့လဲ ရှိတာလေးတွေ ကောက်ပြင်.. ရတဲ့အချိန်နဲ့ လုပ်လို့ရတာလေးတွေ အသစ်လုပ်ပြီး သွားခဲ့တယ်... GCA က ၁၇ ကနေ ၂၀ ရက်နေ့ထိ... ၁၆ ရက်နေ့ကတော့ set up ပေါ့... GCA ဆိုတာ ဘာကြီးလဲ မသိရင် ဒီလင့်ခ်မှာ သွားကြည့်နိုင်ပါတယ်... http://www.gc-asia.sg/ အဓိကကတော့ game industry နဲ့ပတ်သက်တဲ့ conference တွေ ပါတယ်... industry… Continue
Added by Aung Sithu on October 8, 2009 at 2:07pm —
Just share photos from Myanmar Photographers' Website
Added by Phyo Wai Kyaw on October 8, 2009 at 8:58am —